प्रेममा पागल दाजु बहिनीले गरे सबै सीमा तोडेर बिहे, विवाहअघि नै गर्भवती भएको रहस्य खुलेपछी…. – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/प्रेममा पागल दाजु बहिनीले गरे सबै सीमा तोडेर बिहे, विवाहअघि नै गर्भवती भएको रहस्य खुलेपछी….
भारतको बिहारको वैशाली बाट सम्बन्धलाई लज्जित बनाएको एउटा घटना बाहिर आएको छ । यहाँ काका दिदीबहिनीले मन्दिरमा विवाह गरेका छन् । यो घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा तिब्र रुपमा भाइरल भइरहेको छ । घटना भगवानपुर ब्लकको एउटा गाउँको हो । भिडियोमा गाउँको एउटै मन्दिरमा एक केटा र केटीको विवाह भएको देखिन्छ । बालिका पनि ४ महिनाकी गर्भवती छिन् ।
दाजुभाइबीच ३ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको बताइएको छ । यो बिहेको चर्चा गाउँमा फैलिने बित्तिकै केटा र केटीको घरमा भीड जम्मा भयो । विवाहपछि दुई परिवारबीच तनावको वातावरण छ । अब युवतीको परिवारले यो बिहेलाई स्वीकृति दिन्छ कि गर्दैन त्यो हेर्नु छ । दुबैको घर पनि नजिकै छ र नातामा दाजु बहिनि पनि थिए । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको सम्बन्धमा कसैलाई शंका पनि थिएन । बुधबार उनीहरुको विवाहको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । त्यसपछि केटीलाई बाइकमा राखेर केटा घर पुग्यो । यहाँ दुवैका अभिभावकले केटा र केटीलाई सँगै राख्ने सहमति गरेका छन् ।
भाइरल भिडियोमा एक चिम्टी मा वरमिलिओन लिन्छ र केटीको सिउदो भरिन्छ। त्यसपछि खल्तीबाट मङ्गलसूत्र निकालेर युवतीको घाँटीमा लगाइदिन्छ । यी सबै कर्मकाण्ड गरिरहँदा केटाले भिडियो बनाएर भाइरल बनाए । गाउँलेले थाहा पाएपछि घरबाहिर भीड जम्मा भएको थियो । बिहे गरेपछि केटाले आफ्नी काका कि छोरी अर्थात बहिनीलाई बाइकमा बोकेर नयाँ दुलही बनाएर घर ल्याएको छ । सबैले केटा र केटीलाई हेरिरहेका थिए। त्यसयता दाजु–बहिनीको विवाहको चर्चा यस क्षेत्रमा चर्किएको छ भारतको बिहारको वैशाली बाट सम्बन्धलाई लज्जित बनाएको एउटा घटना बाहिर आएको छ । यहाँ काका दिदीबहिनीले मन्दिरमा विवाह गरेका छन् । यो घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा तिब्र रुपमा भाइरल भइरहेको छ । घटना भगवानपुर ब्लकको एउटा गाउँको हो । भिडियोमा गाउँको एउटै मन्दिरमा एक केटा र केटीको विवाह भएको देखिन्छ । बालिका पनि ४ महिनाकी गर्भवती छिन् ।
भाइरल भिडियोमा एक चिम्टी मा वरमिलिओन लिन्छ र केटीको सिउदो भरिन्छ। त्यसपछि खल्तीबाट मङ्गलसूत्र निकालेर युवतीको घाँटीमा लगाइदिन्छ । यी सबै कर्मकाण्ड गरिरहँदा केटाले भिडियो बनाएर भाइरल बनाए । गाउँलेले थाहा पाएपछि घरबाहिर भीड जम्मा भएको थियो । बिहे गरेपछि केटाले आफ्नी काका कि छोरी अर्थात बहिनीलाई बाइकमा बोकेर नयाँ दुलही बनाएर घर ल्याएको छ । सबैले केटा र केटीलाई हेरिरहेका थिए। त्यसयता दाजु–बहिनीको विवाहको चर्चा यस क्षेत्रमा चर्किएको छ ।
कस्तो प्रचलन ? जहाँ महिला प्रहरीमा भर्ती हुन युबतिको गरिन्छ …..